ဓမ္မရသ: တကယ်ရော သုံးဆောင်ပါသလား?
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 9.9.09
ဖြေထားတာ ကောင်းတယ်။ ဆက်လက်ဖြေကြားနိုင်ပါစေကြောင်း
Lwin Lwin Moe said...
ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်။ မေးသူ သူငယ်ချင်းသည်လည်း
အဖြေအား ကျေနပ်အားရပါသည်။ အထူးဝမ်းမြောက်ပါသည်။
လာရောက်ဖတ်ရှု့ ပါတယ်အကို။ ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါလည်းဖြေပေးပါအုံးနော်။
တိုတိုနဲ့ လိုရင်းရောက်အောင်ဖြေသွားတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အသိတစ်ခု ရသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြနိုင်တာကျေးဇူးပါ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်သွားတဲ့ တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိ ဖြေနိုင်တာကလည်း မောင်လေးရဲ့ စေတနာအကျိုးနဲ့ ပါရမီကြောင့်ပဲ ထင်ပါတယ်။ သာဓု သာဓု သာဓု လို့ ခေါ်ရပြန်ပါပြီ...
Dear Ko Aung Oo,
Good answer. It is same way that I believe.